WordPress NiceAdmin Plugin Version 1.0.0 Waa La Sii Daayay | Martech Zone
WordPress NiceAdmin Plugin Version 1.0.0 Waa la fasaxay
Axad, Abriil 8, 2007 Arbaco, Juun 4, 2007 Douglas Karr
Sannad ka dib markaan eegay is-dhexgalka adeegsadaha maamulka WordPress, runtii waan ka sii daalay. Alpsh waxaan ku arkay faallo aniga ah oo ku saabsan baloog kale oo si naxariis leh iigu soo diray WordPress Admin plugin ah oo horumariye kale ka shaqeeyey. Waxaan wax ka beddelay plugin-ka anigoo adeegsanaya sawirada websaydhka WordPress oo waxaan dhisayaa shaashad maamul cusub. Waa kan shaashadda:
Ma beddeleyso adeegsiga ama shaqeynta WordPress wax alla wixii, waxay un ka dhigeysaa wax yar oo fudud in la fiiriyo! Waxaan rajeynayaa inaad jeceshahay!
Mahad gaar ah ayaa u socota Sean Geek La laptop. Sean ayaa isha ku haya isha-baare CSS markaa waxaan ka codsaday caawimadiisa si aan u hagaajiyo qaababka ka hor inta aan sii deyn. Mahadsanid, Sean!
Ka soo degso WordPress Plugin bogga Mashruuca
Dhamaantiin dhamaantiin dadka leh boggaga WordPress, runtii waan ku qanacsanahay inaad ereyga ka hesho tan iyo tan kale Mashaariicda. Sida had iyo jeer ah, haddii raadraacaaga uu liis garaysan yahay, waxaan dib u xidhay noloshayda sidaa darteed waxaad ku mutaysan doontaa iskuxirka Mahadsanid!
Waterfalls iyo Mishiinada dharka lagu dhaqo: Aragtida Maareynta Wax soo saarka
Tani waxay ahayd ol 'classic Can of Worms'
Apr 8, 2007 at 11: 38 PM
Farxad ayay ii ahayd inaan ka caawiyo qalabkan iyo sida ay wax u socdaan, wax badan ayaan ka qaban doonaa haddii loo baahdo.
Apr 9, 2007 at 12: 01 AM
Tani waxay umuuqataa mid aad u wanaagsan ayaa isticmaali doonta!
Apr 9, 2007 at 8: 22 AM
Apr 9, 2007 at 1: 04 AM
Shaqo wacan Doug. Miyaan ugu yeernaa 'Extreme WordPress Makeover' 🙂
Apr 9, 2007 at 8: 21 AM
Baahiyo aad u daran ayaa dhici doona marka xigta, AL! Tani waxay bedeshaa muuqaalka iyo dareenka - laakiin maalintu waa inay udhawdahay in Maamulka uu yeelan karo harag iyo mawduucyo iyada oo aan loo baahnayn shey!
Waxaa laga yaabaa in mawduuca maamulku noqdo maamule.css galka mawduucyada si ay isticmaaleyaashu isugu wada duubaan!
Apr 9, 2007 at 8: 04 AM
Shaqo weyn ayaa jirta Doug .. Run ahaantii, waxaan ku caajistay geerida markaan arko isla guddiga gudiga marar badan.
Waxa ugu fiican ayaa ah inay xajisato shaqooyinka iyadoo wax laga bedelayo kaliya qaabka .. Kaliya wixii aan u baahday. 😀
Apr 9, 2007 at 8: 19 AM
Apr 9, 2007 at 8: 53 AM
Jeclaada shaashadaha cusub. Hal dhibaato ayaa laga helay. Shaashadda Bandhigga / Mowduuca Tifatiraha sax maahan. Daaqada furaha ayaa aad u yar in la isticmaalo. Waa wax aad u yar sida thumbnail u ekaan doonto
Apr 9, 2007 at 12: 02 PM
Miyaad ii soo diri kartaa shaashad shaashad ah iyo sidoo kale waxa OS / Browser aad wado?
Apr 9, 2007 at 5: 30 PM
Ayaa kuu soo diri doona shaashad. Isticmaalka xphome 5.1.2600 Adeegga xirmada 2 dhisida 2600 iyo IE 7.?
Waxaan ka sameeyay faylka pdf-ka 'screendump'. Waxaan kuu soo diri doonaa adiga oo kugu soo lifaaqaya haddii aan ka helo cinwaanka emailkaaga.
Apr 9, 2007 at 6: 38 PM
Taasi waa arrin runtii qallafsan! Waxay u muuqataa in cabbirka font uu hadda u tegey cabbirka 1 ama 2. Xitaa markaan ka takhaluso css, ma helayo natiijooyinka saxda ah. Arrrgh, IE !!!
Apr 9, 2007 at 8: 55 PM
Runta waa la ogyahay, uma isticmaalo shaashaddaas inaan wax ka beddelo feylasha si kasta ha noqotee. Waxaan ku sameeyaa gudaha ka dibna waan hagaajiyaa. Laakiin waxaan dareemay inay waajib igu tahay inaan kula socodsiiyo.
Qodobka waxaa laga heli karaa halkan:
Apr 9, 2007 at 7: 37 PM
Tani waa qabow. Ma aanan arkin waxa horumariyaha kale sameeyay, laakiin tani way fiican tahay.
Waad ku mahadsan tahay sheegista 🙂
Apr 9, 2007 at 9: 43 PM
Waan jeclahay menu-ka mawduucan, aad u xirfad badan. Waxaan ku rakibayaa dhammaan 8 boggeyga, waxaanna ka dhigayaa mid caadi u ah macaamiisha mareegaha.
Matt @ Soo gal Host.com
Apr 14, 2007 at 1: 30 AM
Sida uu yiri Ross, sidoo kale waxaan la kulmayaa isla dhibaatada IE7 + WinXPSP2.
Apr 14, 2007 at 5: 48 PM
Waxay umuuqataa AAD si lamid ah tii hore. Maxaad ku bedeshay shaxanka si aad uga dhigto mid waxtar leh? Ma jirtaa shay gaar ah oo horseed u ahaa isbedelka?
Apr 14, 2007 at 6: 11 PM
Isbadalada dhamaantood waa kuwo bilic leh, Thor. Noocyada farta iyo qaababka ayaa waxyar uun indhaha kaga fudud. Waxaan jeclaan lahaa inaan ku dhufto dib u qorista qoritaanka laakiin waqtiga ilama joogo dhinacayga. 🙂
Apr 27, 2007 at 11: 44 PM
Ma jiri doonaa wax hagaajin ah IE dhowaan? Sanduuqa tifaftiraha mawduuca ayaa aad u yar.
Oktoobar 6, 2007 at 7:08 AM
Lagu daray hagaajin yar oo loogu talagalay WordPress 2.3.
Jan 12, 2008 saacadu markay ahayd 9:12 PM
Waxaan arkay faallooyinkan gadaal bishii Abriil, waxaan u maleynayaa inaan helay isla "cabbir yar" cabirka arrinta leh qaybaha tifaftirka…